China Outdoor Full Color Double Sided Taxi Roof LED Display P4 ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |AVOE
စမတ်ကျပြီး Intelligent LED မျက်နှာပြင် ကိရိယာ။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော LED Motion Display ကိရိယာ။
တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မြန်ဆန်ခြင်း။
ပါးလွှာသော ဒီဇိုင်း၊ တောက်ပမှု အလွန်မြင့်မားသည်။
ဆော့ဝဲလ်နှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲဆိုင်ရာ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု 7/24။
ရွေ့လျားနိုင်မှုသည် တန်ဖိုးကို ထုတ်ပေးသည်။
AVOE တက္ကစီခေါင်မိုး LED မျက်နှာပြင်သည် ကြော်ငြာနှင့် သတင်းများကို ဖော်ပြနိုင်သည့် မိုဘိုင်းမီဒီယာပလပ်ဖောင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။သမားရိုးကျမီဒီယာများနှင့်မတူဘဲ AVOE တက္ကစီခေါင်မိုး LED မျက်နှာပြင်သည် တပ်ဆင်ထားသော GPS မော်ဂျူးမှတစ်ဆင့် တည်နေရာနှင့် အသွားအလာအချက်အလက်များအရ ကြော်ငြာများကို ထက်မြက်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။တက္ကစီအမိုး LED မျက်နှာပြင်များသည် ကြိုးမဲ့ 3G/4G အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့် အော်ပရေတာမှ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။စက္ကန့်အလိုက် ကြော်ငြာများထုတ်ရန် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော နည်းလမ်းဖြင့် သီးခြားတောင်းဆိုချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပါ။Taxi roof LED Display သည် တစ်ရက်လျှင် 24 နာရီ ၊ တစ်နှစ်လျှင် 365 ရက်ရှိသည်။ဟိုတယ်များ၊ လေဆိပ်၊ မီးရထားဘူတာနှင့် လူကြိုက်များသော အခြားနေရာများတွင် ထိတွေ့မှု မြင့်မားသည်။
AVOE တက္ကစီအမိုး LED မျက်နှာပြင်သည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် 100W စားသုံးသည်၊ တောက်ပမှုကို တပ်ဆင်ထားသော အလိုအလျောက်တောက်ပမှုအာရုံခံကိရိယာဖြင့် ဉာဏ်ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။တိကျသော ပါဝါထည့်သွင်းမှုနည်းပညာသည် အနီရောင်နှင့် အပြာရောင် ဒိုင်အိုဒိတ်များကို မတူညီသောဗို့အားဖြင့် သီးခြားစီ မောင်းနှင်နိုင်စေပါသည်။ရလဒ်အနေဖြင့် AVOE taxi roof LED display သည် ရိုးရိုး LED display ပါဝါသုံးစွဲမှုထက် 50% လျော့နည်းသည်။
ကြိုးမဲ့နှင့် အဝေးထိန်းစနစ်၊ စမတ်ကစားစာရင်း
မျက်နှာပြင်အားလုံးကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့် iPad တို့တွင် terminal တစ်ခုမှ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။စီးပွားဖြစ်ပြသမှုသည် ယာဉ်အသွားအလာနှင့် တည်နေရာအရဖြစ်ပြီး၊ AVOE တက္ကစီခေါင်မိုး LED မျက်နှာပြင်ဖြင့် ကားတစ်စီးသည် သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာသို့ ဝင်ရောက်သည့်အခါ၊ ညွှန်ပြသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို အလိုအလျောက် ပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မြင့်မားသော Ingress Protection
ကြိုးမဲ့နှင့် အဝေးထိန်းစနစ်၊ စမတ်ကစားစာရင်း Ingress ကာကွယ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 56 အထိ၊ ဒိုင်အိုဒိုက်များကို ကာကွယ်ရန် ပွင့်လင်းမြင်သာသော PC ကာဗာနှင့် AVOE တက္ကစီခေါင်မိုး LED မျက်နှာပြင်သည် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ပြီး တုန်လှုပ်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။အလူမီနီယံအလွိုင်းအောက်တွင် ထည့်သွင်းထားသော ပါဝါ module သည် အတွင်းမှထုတ်ပေးသော အပူကို ၎င်းမှတဆင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။AVOE တက္ကစီအမိုး LED မျက်နှာပြင်သည်လည်း ရေရှည်အသုံးပြုမှုအတွက် ပိုမိုတာရှည်ခံစေရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကာကွယ်မှုနှင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်မှုပါရှိသည်။
Matting ပစ္စည်း၊ အလင်းပြန်မှု သုည
အကြောင်းအရာကို ပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်စေရန်အတွက် မတူညီသောအချိန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အခြေခံ၍ တောက်ပမှုကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။အလင်းပြန်ဟပ်မှုကို သုညဖြစ်စေရန်အတွက် မျက်နှာပြင်ကို ဖျာကပ်ပစ္စည်းများဖြင့် ပတ်ထားသည်။
ရှေ့သို့ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ခက်ခဲခြင်း။
Module သည် ရှေ့မှဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ချက်ခြင်းပြီးစလွယ်နှင့် မစိုက်ထုတ်ဘဲ Cabinet သည် ဘက်ခြမ်းမှဝင်ရောက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
LED မျက်နှာပြင်ကို ကားပေါ်တွင် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး မျက်နှာပြင်ပြသမှုကို ပိုမိုပျော့ပြောင်းစေပြီး အကြောင်းအရာကို ပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်စေရန်အတွက် မျက်နှာပြင်အနေအထားကို လျှောချနိုင်သည်။
1. 3G/4G မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်း။
2. အလွန်ပါးလွှာပြီး ပေါ့ပါးသော ဒီဇိုင်းဖြင့် သေသေချာချာ အလူမီနီယံ
3. အတွင်းပိုင်းဝိုင်ယာကြိုးကြိုးကို စနစ်တကျစီစဉ်ထားပါ။
4. Flash၊ ရုပ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုနှင့် စာသားတို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
5. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လွယ်ကူပြီး IP65 ဒီဇိုင်းနှင့် ကြာရှည်ခံသည့် မျက်နှာပြင်
2 Pixel ဖွဲ့စည်းမှု RGB 3-in-1
3 Pixel Density 62500 pixels/㎡
4 မော်ဂျူးအရွယ်အစား 320*160 မီလီမီတာ
5 Module Resolution 80*40
7 အများဆုံးစားသုံးမှု 450W
8 ပျမ်းမျှစားသုံးမှု 150W
9 White Balance အရောင် 6000-15000K
10 ဘောင်အရွယ်အစား L: 1000mm H:360mm, W:160mm(အောက်ခြေ),100mm(အပေါ်)
12 မျက်နှာပြင် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 240*80
13 တောက်ပမှု > 5000cd/㎡
14 အလင်းအမှောင် အလင်းအမှောင် >8000:1
16 ဒေါင်လိုက် မြင်ကွင်း 160°
17 အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုခြင်းအကွာအဝေး 5m
18 ချို့ယွင်းချက်နှုန်း ≤3/10000
19 အရောင် ၁၆၇၇၇၂၁၆
20 တောက်ပမှုထိန်းချုပ်မှု အနီရောင်၊ အစိမ်းနှင့် အပြာ 256 အဆင့်/တစ်ခုစီ
21 တောက်ပမှုထိန်းချုပ်မှု 100 စဉ်ဆက်မပြတ်ချိန်ညှိနိုင်သော၊ အလိုအလျောက် / manua
22 ထပ်ခါတလဲလဲ အကြိမ်ရေ > 60-85Hz
23 စကင်န်ကြိမ်နှုန်း > 1920Hz
24 စကင်န်မုဒ် 1/10 စကင်န်
25 မောင်းနှင်နည်း စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ
26 လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ DC12V
27 သက်တမ်း နာရီ 100,000
28 အလိုအလျောက်တောက်ပမှုအာရုံခံကိရိယာ ဟုတ်ကဲ့
29 အရောင်အပူချိန် 3500 ~ 12000 (အဖြူကွက်- 6500-12000)
30 White Balance Coordinate X:Y=0.27:0.29 ဝန်းကျင်
31 ထိန်းချုပ်မုဒ် 3G/4G/Earthen net/WIFI/USB
32 ဂျီပီအက်စ် ဟုတ်ကဲ့
33 Screen Surface Flatness <1 မီလီမီတာ
34 အပူချိန်လည်ပတ်မှု -30°~+60°
35 စိုထိုင်းဆ အလုပ်လုပ်ခြင်း။ 10%–95%RH
36 မျက်နှာပြင်ကာကွယ်ရေး ရေစိုခံ၊ သံချေးမတက်၊ ဖုန်မှုန့်-ဒဏ်ခံ၊ တည်ငြိမ်မှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ မှိုဆန့်ကျင်
37 ပါဝါကာကွယ်ရေး over-temperature, over-current, over-voltage protection ဖြင့်
38 ညီညွတ်မှု ကပ်လျက်ပစ်ဆယ်များကြား- ≤5%;ကပ်လျက် မော်ဂျူးများကြား-≤3%
39 စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိကျမှု မော်ဂျူးပြားပြား < 1.5 မီလီမီတာ patchwork တိကျမှု < 1 မီလီမီတာ
40 မျက်နှာပြင်အလေးချိန် 16 ကီလိုဂရမ်
41 အထုပ်နှင့်အတူ GW 22 ကီလိုဂရမ်
ယခင်- ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်း LED ဆိုင်းဘုတ်
နောက်တစ်ခု: အတွင်းပိုင်းအကြည် LED မျက်နှာပြင်
P2.5 Taxi Top Roof Led ဆိုင်းဘုတ်
P3 Taxi Top Roof Led ဆိုင်းဘုတ်
P5 Taxi Top Roof Led ဆိုင်းဘုတ်
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် LED မျက်နှာပြင် မော်ဂျူး
LED Video ပရိုဆက်ဆာ LVP605 စီးရီး
P3.076 ပြင်ပ LED Module
VX Series ဗီဒီယို ပရိုဆက်ဆာ
Outdoor Led မျက်နှာပြင် LED ရုပ်ထွက် Led Display မျက်နှာပြင် ဆိုင်းဘုတ် Led မျက်နှာပြင် Outdoor Led Display ၊